NOOCYADA DHIIGGA: ” Jamaal Cabdi Muuse ” Qaybtii 2-aad. | CeelGardi News
NOOCYADA DHIIGGA: ” Jamaal Cabdi Muuse ” Qaybtii 2-aad.
Falanqeynta Blood Type/group A.
Ugu horreyn, blood group A, waa nooca labaad ee uumiyaha dunida ku uumani u badan yahay, waxa weheliya protein la yidhaa Rh factor oo dhiigga A u kala qaybiya labo waaxood oo kala ah A taban “A Negative” iyo A togan “A Positive”. Blood Group A, wuxu leeyahay A, Antigens oo degsiimadeedu tahay unugyada dhiigga cas “RBC’s” iyo Anti B antibodies oo laga helo xerada Plasma, oo ah qaybta dareeraha ah ee unugyada dhiigga cas.
Mar kale, RhD Protein ayaa sheega in blood group A noqdo A+ve ama A-ve. Sidoo kale, sameysanka xaddiga Antigens ka laga helo degsiimada unugyada cas “RBC’s”, waxa jaan-gooya kolba xaddiga Hormoonada la soo daayo. Haddii qofka aadmiga ahi haysto/leeyahay blood group A, waxa la arkaa inuu yeesho tirada ugu badan ee hormoonada loo yaqaan Stress hormones, gaar ahaan Cortisol hormone.
Run ahaantii, xaqiiqooyinka ku gedaaman blood group ARh+ve/ ARh-ve, waxa ka mid ah:
1. Blood group ARh+ve:
▪ Wuxu qaadan karaa A+ve, O+ve, A-ve iyo O-ve.
▪ Halka la siin karo kaliya A+ve iyo AB+ve.
2. Blood group ARh-ve, waa nooca labaad ee ugu tirada yar noocyada dhiigga dunida oo dhan, 67-kii qofba kaliya hal qof baa B negative ah, sidaa awgeed, waxa ahmiyad wayn la siiyaa kaydinta iyo shubista dhiiga B negative. Dhinaca kale, blood group ARh negative:
▪Wuxu qaadan karaa kaliya ARh-ve iyo O-ve.
▪Iyada oo la siin karo A-ve, A+ve, AB-ve iyo AB+ve.
Hadaba, xidhiidhka nooca dhiigga iyo dabeecadda qofka, waxa daah-qaaday sargaal ka tirsanaa ciidamada qaranka Japan, sannadihii 1930-naadkii. Isaga oo baadhitaan iyo ogaal doon badan ku sameeyay raadinta xidhiidhka ka dhexeeya nooca dhiigga iyo qofnimada taban ama togan ee aadmiga. Xaqiiqdii, xidhiidhka nooca dhiiga iyo shaqsiyada qofka ayaa ah qodob xiiso badan ka leh wadamada dhaca qaaradda Aasiya.
Qodob kale, xidhiidhka ka dhexeeya nooca dhiigga “ABO blood type” iyo qofnimada qofka aadmiga, waxa daraasad ku sameeyay sannadihii 1970’naadkii Mashiko Nomi oo u dhashay isla dalka Japan, ahaana saxafi caan ah.
Inkasta oo aan aragtidan loo hayn xaqiiqo cilmi ah oo wadata cadaymo iyo daliillo caafimaad iyo saynis oo qeexan. Hadana waa dood ku faafsan dunida, gaar ahaan geyiga Soomaalida. Sidaa darteed, bal aan idinla wadaago xidhiidhka ka dhexeeya Blood Group A iyo dabeecadda qofka oo aan ka soo xiganayo dhitedii culimada Japanese ka ah. Tusaale ahaan:
1. Qofnimada Togan:
▪ Qof Degan,
▪ Qof Daacad ah,
▪ Qof Wanaagsan,
▪ Qof Abaabule ah,
▪ Qof Xirfadle ah,
▪ Qof Baraarugsan.
2. Qofnimada Tabam:
▪ Qof Gardaro/Daandaansi badan,
▪ Qof macangag ah,
▪ Qof Fadh-fadh/Qod-qod badan,
▪ Qof Caqabado Yagleel ah,
▪ Qof Xume-sahadis ah,
▪ Qof Dareen badan.
La soco Qaybaha kale,